Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Toerana tsara indrindra eran-tany hividianana trano fialan-tsasatra vaovao
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • Resorts • Safety • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Amin'ny maha renivohitry ny faritra avaratr'i Italia ao Veneto, i Venise dia nomena anarana ho toerana fialan-tsasatra voalohany indrindra eran-tany.
Ny fandinihana vaovao dia nandinika toerana malaza eran'izao tontolo izao momba ny anton-javatra toy ny zavatra tokony hatao, ny vidiny, ny tahan'ny heloka bevava ary ny toetrandro eo an-toerana.
Noforonina avy eo ny isa mavesatra amin'ny ankapobeny ary nomena laharana ny firenena tsirairay.
Toerana 10 ambony hividianana trano fialan-tsasatra eran'izao tontolo izao
laharana Destination Zavatra hatao isaky ny olona 10,000 Toeram-pisakafoanana isaky ny olona 10,000 Heloka Index Salanisan'ny vidim-piainana isam-bolana ho an'ny fianakaviana misy efatra (USD) Vidin'ny trano antonony isaky ny m2 (USD) Temperature antonony (˚C) Salan'ny orana isam-bolana (mm) Isa ankapobeny / 10
1 Venice, Italia 358 2,628 31.63 $3,691 $4,930 13.1 64.2 6.92
2 Paphos, Sipra 115 1,511 28.38 $2,560 $1,837 19.2 32.2 6.91
3 Abu Dhabi, Emirà Arabo Mitambatra 5 231 12.04 $2,865 $2,836 27.6 10.8 6.70
6 Corfu, Gresy 74 1,322 19.45 $2,910 $1,647 17.2 85.0 6.28
7 Las Palmas de Gran Canaria, Espana 12 476 26.08 $2,409 $2,912 21.3 13.7 6.27
8 Santa Cruz de Tenerife, Espaina 13 421 27.00 $2,545 $2,148 21.2 21.7 6.20
9 Larnaca, Sipra 45 707 29.69 $2,834 $1,565 19.5 31.7 6.19
10 Marbella, Espaina 56 1,749 38.59 $2,530 $3,684 17.3 48.6 6.16
Amin'ny maha renivohitry ny faritra avaratr'i Italia ao Veneto, i Venise dia nomena anarana ho toerana fialan-tsasatra voalohany indrindra eran-tany. Fantatra fa naorina teo amin'ny lagoon misy nosy kely maherin'ny 100 eo amoron'ny Adriatika, ny antony lehibe mahatonga azy io ho laharana voalohany dia ny fifantohan'ny zavatra atao sy ny toerana hihinanana sy hisotroana ao anatin'ny faritra kely misy azy.
Raha mila trano fialan-tsasatra any amin'ny toerana misy mpizahatany vitsy kokoa ianao, izay ahafahanao miroboka amin'ny mponina ao an-toerana, dia mety ho safidy tsara i Paphos any Chypre. Laharana faharoa ny tanàna noho ny toetr'andro Mediteraneana misy azy, miaraka amin'ny maripana antonony isan-taona 19.2˚C, ary anisan'ny toerana mora kokoa nodinihina, miaraka amin'ny sandan'ny trano isaky ny metatra toradroa $1,837.
Abu Dhabi nahazo ny laharana fahatelo teo amin'ny filaharana, ary nahazo ny isa ambany indrindra amin'ny heloka bevava amin'ireo toerana rehetra nodinihina, zava-dehibe ho an'ireo izay mihevitra ny fahatsapana ho mahazo aina sy azo antoka ao an-tranony lavitra ny tranony ho zava-dehibe.
Antalya, Tiorkia no toerana misy ny vidim-piainana ambany indrindra isam-bolana amin'ny $1,339 ho an'ny fianakaviana misy efatra. Antalya ihany koa no toerana misy ny vidiny ambany indrindra amin'ny $ 730 isaky ny metatra toradroa.
Ho an'ny mpivavaka amin'ny masoandro, Las Vegas no toerana misy rotsak'orana ambany indrindra amin'ny 8.9mm monja isam-bolana. Raha ny lehilahy any Maldives dia manana mari-pana ambony indrindra amin'ny 28.5˚C.